Alliance Air họpụtara onye isi nwanyị mbụ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Alliance Air họpụtara onye isi nwanyị mbụ
Airlines • Aviation • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
A họpụtara Harpreet Singh Chief Executive Officer nke Alliance Ikuku, onye enyemaka nke Air India (Ai).
Ọ ghọrọ nwanyị izizi duziri ụgbọ elu ndị India.
Harpreet Singh bụ onye isi oche nke Air India na-ahụ maka nchekwa ụgbọ elu, mpaghara ọ bụ ọkachamara na ya. Onye isi Nivedita Bhasin ga-anọchi ya maka ọkwa a. Harpreet sonyeere Air India na 1988 dị ka otu n'ime ụmụ nwanyị ndị mbụ sonyere n'ahịrị.
Ọ bụ nwanyị mbụ na-anya ụgbọelu nke Air India họpụtara na 1988. Harpreet bụkwa onye isi ndị otu ụmụnwaanyị India, ọ bụ ezie na ọ nweghị ike ife efe n'ihi ahụike.
Onu ogugu ndi umuaka ndi nwanyi n’India kariri okpukpu abuo karia nke onu ogugu uwa, dika data sitere n'aka ndi International Society of Women Airline Pilot na 2018, ya mere, obughi ihe ijuanya na India nwere onu ogugu kacha elu nke umuaka ndi nwanyi n'uwa.
Ọ bụ ezie na a nụchara ya, a gaghị ere Alliance Air na Air India. Willfọdụ n'ime ụgbọ elu Air India ga-ebufe Alliance Air n'ụdị Boeing 747s ochie. Ka ọ dị ugbu a, Alliance Air nwere ụgbọ mmiri nke turboprops.